कसले बुझ्ने दुर्गमका पीडा ?
प्रताप ओली बझाङ, २४ पुस
म सानै थिएँ । हिउँ पर्दा रमाइलो गर्न निस्कन्थें । अरूहरू कतै लुडो, कतै तासपत्ती गेम खेलेर रमाइलो गर्थे, म भने कहिले गुलेली र भरूवा बन्दुक लिएर हिउँमा वन्यजन्तु र पक्षी लखेट्न जान्थें । हुन त सानो छँदा मेरा आवश्यकता यतिमै पनि सीमित थिए होलान् ।
जिल्लामा एउटा मात्रै एफएम रेडियो थियो साइपाल । घरमा बुबा, बाजे र काका समाचार सुनेर आज हिउँ पर्ने रे, भोलि यो काम रोकिने भयो । यता जानु थियो उता जानु थियो । यो हिउँ यति धेरै नपरेको भए जाति हुन्थ्यो भनेको सुन्दा मलाई उहाँहरूको कुरा सेनेर औडाहा लाग्थ्यो । ठूलो हुँदै जाँदा मेरा आवश्यकता प्रविधि र विकाससँग जोडिन पुगे । आज एक सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार हुँदा मलाई बझाङ जिल्लाभित्र बस्नु साँच्चिकै जेलभित्र बसेझैं अनुभव हुन थालेको छ ।
जिल्लाका आठ एफएम रेडियो अझै घामकै भरमा सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतले भर्खरै छोएको बझाङ जिल्लामा विद्युतको पहुँच पनि निकै कम छ । घाम नलाग्दा जिल्लाभरका नेपाल टेलिकमका २० टावरले काम गर्नै छोडेका छन् ।
भलै कर नतिरेको आरोप खेपिरहेको एनसेलको जिल्लाभर निकै राम्रो ब्याकअप भएकाले काम गरिरह्यो । सडक सञ्जाल डडेल्धुरादेखि ढोल्यामोडसम्म हिउँले ढाकियो । यसरी सबै सुविधाबाट हामी लगभग आठ दिन जति वञ्चित भयौं । सेवासुविधा पुगेकै भए पनि भरपर्दो नहुनाले कसैले पनि दुर्गम भेग नरोज्ने रहेछन् । म यतै जन्मिएको भए पनि यति धेरै खल्लो महसुस गर्छु भने बाहिरका मानिसले के सोच्लान् ? कसरी बस्लान् ?
जिल्लाका हुनेखाने वर्ग सुविधाभोगी हुन् । त्यसैले अहिले उनीहरू सुुगमतिर बसाइँ सरिरहेका छन् । आँटिला युवाहरू विदेश गएर मरीमरी टन्टलापुर घाम र गर्मीमा काम गर्दै नेपाल सरकारलाई गाली गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू चिसोको निहुँमा घरमा रमाइरहेका छन् । तर, सेवा सुविधा दिनमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
खाना पाक्ला र खाऊँला भन्ने हाम्रो मानसिकता कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ? यो कसैले मनन गर्दैनन् । जिल्लाभित्र अदक्ष जनशक्ति मात्र बचेको छ । स्थानीय तहले पनि देखाउने दाँतजस्ता कार्यक्रम गरेर आफ्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेका छन् । यसरी विपद् आउँदा कसरी बच्ने ? सडक, विद्युत, सञ्चारलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय निकै गौण लाग्न थालेको छ ।
एउटै पुस महिनामा त हप्ता दिनसम्म हामी घरभित्रै थुनियौं भने अबका माघ, फागुन महिना त अझ आउन बाँकी नै छन् । नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको भन्न पनि लाज भइसकेको छ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्क जिल्लालाई नै सञ्चारविहीन बनाएर हरायो तर निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले जिल्लाभर राम्रो सेवा दिइरह्यो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा अचेल एनसेलकै जयजकार हुने गरेको छ ।
फोन सम्पर्क हुँदा मानिसलाई सहज हुन्छ नै, तर विशेष गरी यस्ता विपद्मा अझ बढी भूमिका सञ्चारको रहन्छ । घरबाट धनगढीका लागि हिँडेका केही युवाहरू ८ घण्टाको बाटो तीन दिन लगाएर पुग्यौं भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेका छन् ।
हामी सञ्चारकर्मीलाई जिल्लाको वस्तुस्थितिका बारेमा सञ्चारगृहसम्म सूचना दिन भन्ने अन्योल भइरहेको छ । भौगोलिक दुर्गमताले त जिल्ला पछि प¥यो नै, मानसिक दुर्गमता पनि झन्झन् बढ्न थालेको छ अचेल ।
२१औं शताब्दीका कुरा गर्छौं, हामी यन्त्रमानवका कुरा गर्छौं, नेपाल बसेर अमेरिकाको आनन्द लिन खोज्छौं तर २१औं शताब्दी लाग्यो भन्नेसम्म आभाष समाजबाट प्रवाह गर्न सक्दैनौं । हामी अरूको यन्त्रमानवमा रमाउँछौं तर आफूले उत्पादन गर्नतिर हाम्रो ध्यान जाँदैन । अमेरिकाको सुख सुविधा नेपालमा बसेर लिन खोज्छौं तर नेपाललाई अमेरिकाजस्तो बनाउने भन्ने कुरा कहिल्यै सोच्दैनौं । यस्ता परनिर्भर बानीले हाम्रो देश झन् झन् पछाडि पर्दै गएको छ । सुगम बझाङ आज दुर्गम भएको छ ।
सडककै कुरा गर्दा खोड्पे–चैनपुर जयपृथ्वी राजमार्ग अझै शाखा सडकभन्दा कमजोर छ । ठाउँठाउँमा पहिरोको डर छ । कालोपत्रे उप्किएको छ । ठाउँठाउँमा पनडुब्बी खाल्डा छन् । अहिले त सडक विभागले पनि ठूलै रकम पाएको छ ।
सकिने जति स्थानीय तहले गर्दा पनि समस्या टथ्र्यो । हिउँदमा बन्द हुने सडकको वर्षा लाग्दा के हाल होला ? अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन । अझै पनि बझाङलगायतका उच्च भेगमा हिमपात भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा सीमित ठाउँमा मात्रै दिइराखेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् । स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सडक, सरकारी कार्यालय बन्दजस्तै छन् । यसमा सरकारले कहिले सोच्ने ? कि सधैं हामीले विपद्कै बन्दी भएर बस्नुपर्ने ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, २४ पुस २०७६, ०७:०७:००
पुष्पा अधिकारीलाई खुला पत्र